Medjugorje: Ozi nke nwanyi anyi n’ile banyere amara Chukwu, ka esi aju ma nata
Paolo Tescione	Edere ya Ọgọstụ 22, 2020 Ọgọstụ 22, 2020
Ozi e dere na Jenụwarị 25, 1984
N'abalị a ka m chọrọ ịkụziri gị ịtụgharị uche n'ịhụnanya. Nke mbu, mezie onwe gi na onye obula site na iche echiche banyere ndi gi na nsogbu gi na mmekorita ma gbaghara ha: mgbe ahu n’ihu ndi otu, ighota onodu ndia ma juo Chineke maka amara nke ngbaghara. N'ụzọ dị otu a, mgbe imepere ma ‘sachapụ’ obi gị, a ga-enye gị ihe niile ị na-arịọ Onye-nwe. Karịsịa, rịọ ya maka onyinye mmụọ nke dị mkpa maka ịhụnanya gị iji zuo ezu.
Ozi e dere na Jenụwarị 30, 1984
«Kpee ekpere. Achọrọ m ime ka obi unu dị ọcha n’ekpere. Ekpere dị oké mkpa n'ihi na Chineke na-enye gị amara mgbe ị na-ekpe ekpere ».
Ozi e dere n’ụbọchị Ọgọst 1, 1984
Afọ iri abụọ nke amụrụ m ka a ga-eme n’Ọgọst XNUMXth. Maka ubochi ahu ka Chineke nyere m ikike inye gi onyinye puru iche ma nye uwa ihe ngozi. A na m arịọ gị ka ịkwadebe nke ọma n’ụbọchị atọ iji kwado m naanị. N’ụbọchị ndị ahụ, ị ​​naghị arụ ọrụ. Were okpu Rosary gi wee kpee. Achịcha na achịcha na mmiri. N’ime narị afọ a nile enyefewo m onwe m kpam kpam n’aka gị: ọ karịrị akarị ma ọ bụrụ na m arịọ gị ka ị rarara m ụbọchị atọ opekata mpe?
Ozi e dere na Jenụwarị 3, 1985
Ezigbo ụmụaka, n’ụbọchị ndị a Onye-nwe-anyị nyegoro unu amara dị ukwuu. Ka izu uka a buru oge inye ekele diri gi diri amara niile Chukwu nyere gi. Daalụ maka ịza oku m!
Machị 25, 1985
Nwere ike nweta ọtụtụ graces ka ịchọrọ: ọ dabere na gị. Inwere ike ịnata ihunanya Chukwu mgbe na ole ichoro: ọ dabere na gị.
Mee 9, 1985
Umu nnem, mba, unu amaghi otutu amara nke Chineke n’eme ka unu ghara itu ubochi a, bu nke Mo Nso na aru oru n’otu uzo. Obi gị chigharịwo n’ihe nke ụwa, ndị a na-egbochi gị. Tụgharịa obi gị n’ekpere ma rịọ maka mmụọ nsọ ka ọ wụkwasị gị! Daalụ maka ịza oku m!
Ozi edere na July 2, 1985
Enweghị m ike ịgwa gị okwu n'abalị a n'ihi na emechiri obi gị. N’ezie, unu emeghị ihe m gwara unu. Ọ bụrụhaala na ị nọgidere, enweghị m ike ịgwa gị ihe ọ bụla ọzọ, enweghị m ike inye gị onyinye.
Septemba 12, 1985
Ezigbo ụmụaka, n'ụbọchị ndị a (Novena maka oriri nke Mbuli Elu nke obe) Achọrọ m ịkpọ gị ka ị debe Cross n'etiti ihe niile. Karịsịa, kpee ekpere n'ihu Obe, nke sitere na nnukwu amara. N’ụbọchị ndị a, mee udo pụrụ iche maka obe n’ụlọ gị. Kwee nkwa ka iwe ghara iwe Jizọs na Obe ma ghara imerụ ya ahụ. Daalụ maka ịza oku m!
Ozi sitere na October 3, 1985
Ezigbo ụmụaka m, achọrọ m ịkpọ unu ka unu kelee Chineke maka amara niile o nyere gị. Keleenụ Chukwu maka mkpụrụ niile, nyenu ya otuto. Ezigbo ụmụaka, mụta inwe obi ekele n’obere ihe, otu a ka unu ga-esi nye ekele maka ihe ukwu. Daalụ maka ịza oku m!
Machị 6, 1986
Ezigbo ụmụaka, parish a m họọrọ bụ parish pụrụ iche, nke dị iche na ndị ọzọ. Ekelere m ndị niile ji obi ha niile ekpe ekpere. Ezigbo ụmụaka, ana m ebu ụzọ nye ndị parish ozi ndị ahụ, emesịa ndị ọzọ niile. Ọ dị gị n'aka ịnabata ozi ndị mbụ ahụ, ọzọ gachara ndị ọzọ. Ga-aza ajụjụ maka ya n’ihu m na n’ihu Ọkpara m Jizọs.
Machị 20, 1986
Umu nne m, ozi nke abuo maka oge nke Lent bu nka: megharia ekpere n’obe. Umuaka, a na m enye unu amara di iche, Jisos si na obe nye unu onyinye amara. Nabata ha ma bie ha! Bugharia uche na mmasi nke Jisos, ma sonyere Jesus na ndu. Daalụ maka ịza oku m!
Machị 22, 1986
Ezigbo ụmụaka, maranụ na unu ga-anabata ịhụnanya Chukwu ma ọ bụrụ na unu aghọta na n’elu obe Chineke na-enye unu amara ya na ịhụnanya ya. Chineke na-etinye amara ya n'aka gị. Nwere ike nweta ọtụtụ ihe masịrị gị, ọ dịịrị gị. Ya mere kpee ekpere, kpee ekpere!
Machị 13, 1986
A na-enye ọtụtụ ndị otu a ekele: ajụla ha!
Eprel 3, 1986
Ezigbo ụmụaka, a na m akpọ ụnụ oku ibi Mass dị Nsọ. Otutu n’ime unu enwetala mma ya, mana obu ndi na achoghi ibia. A họpụtara m unu, ụmụ m hụrụ n'anya, ma Jizọs nye ụnụ amara na Mass dị Nsọ. Ya mere, bie ọgbụgba dị nsọ anya ma ka ọbịbịa gị jupụta n'ọ ofụ. Bịa na ịhụnanya ma nabata Mass dị Nsọ n'ime gị. Daalụ maka ịza oku m!
Ezigbo ụmụaka, n’ụbọchị ndị a, Onyenwe m kwere ka m ritere ụnụ ọtụtụ amara. Maka nke a, ezigbo ụmụ m, achọrọ m ịkpọ unu ọzọ ka unu kpee ekpere. Na-ekpe ekpere oge niile, m ga-enyekwa gị ọ joyụ nke Onyenwe anyị na-enye m. Site na amara ndị a, ụmụ m hụrụ n'anya, achọrọ m ka ahụhụ unu bụrụ ọ joyụ. Abụ m nne gị ma chọọ inyere gị aka. Daalụ maka ịza oku m!
Septemba 8, 1986
Otutu ndi oria, otutu ndi no na nkpa amalitela ikpe ekpere maka ogwugwo nke ha na Medjugorje. Ma mgbe ha laruru, n’oge na-adịghị anya, ha kwụsịrị ikpe ekpere, si otú ahụ tụfuo ohere ha nwere inweta amara ha na-echere.
Ozi sitere na October 2, 1986
Ezigbo ụmụaka, a na m akpọkwa unu taa ka unu kpee ekpere. ,Mụ m, ụnwenụ, unu enweghị ike ịghọta otu ekpere si baa uru rue mgbe ị gwara onwe gị, sị: Ugbu a bụ oge ikpe ekpere. Ugbu a ọ dịghị ihe ọzọ dị m mkpa. Ugbua onweghi onye dị m mkpa ma e wezuga Chukwu. Ezigbo ụmụaka, jirinụ ịhụnanya were ịnụ ọkụ n'obi na-ekpe ekpere, ka Chineke wee were amara ya kwụọ ụnụ ụgwọ. Daalụ maka ịza oku m!
Nọvemba 13, 1986
"Ezigbo ụmụaka m, ọ dị m ka unu niile ndị gara n'ebe amara a, ma ọ bụ ndị nọ nso ebe a, si wetara m onyinye pụrụ iche, n'eluigwe: ịdị nsọ gị".
Ozi akara ụbọchị nke iri na atọ nke ọnwa iri na atọ n’afọ 25
Ezigbo ụmụaka, mụ onwe m na-ekelekwa Onyenwe anyị maka ihe niile ọ na-eme, karịchaa maka onyinye nke ịnọnyere gị taa. Ezigbo ụmụaka, ụbọchị ndị a bụ mgbe Nna na-enye ndị niile meghere obi ha obi ọma pụrụ iche. M na-agọzi unu, achọrọ m unu, ụmụ m, unu ga-ama amara na imere Chineke ihe niile, ka e wee nye Ya otuto site n'aka unu. Obi m na esochi nzọụkwụ gị anya. Daalụ maka ịza oku m!
Nke gara aga Post Gara aga post:Ezi ofufe n'oge: Iji okwu ahụ mee ihe nke ọma
Next Post → Post ozo:Ntughari uche ta ta na okwukwe gi na ihe omuma banyere Mesaia a